नाकाबन्दीमा गर्माएको तेल भण्डारण निर्माणकाे काम कहाँ पुग्यो ? - Paschimnepal.com
नाकाबन्दीमा गर्माएको तेल भण्डारण निर्माणकाे काम कहाँ पुग्यो ?
दुई दिन आपूर्ती प्रभावित भए कर्णालीमा सवारी ठप्प हुने स्थिति
सुर्खेत । ०७२ सालको नाकाबन्दीमा ६ महिनासम्म नेपाली जनताले भोग्नु सास्ती भोगे । मधेस आन्दोलनका क्रममा भारतले अघोषित लगाएको नाकाबन्दीले ६ महिनासम्म जनजीवन प्रभावित भयो । त्यहीँ बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सातै प्रदेशमा तेल भण्डारण राख्ने योजना अघि सार्नुभयो । तर नाकाबन्दीमा निकै गर्माएको तेल भण्डारण संरचना निर्माणको काम चार वर्ष वित्दा समेत काम भने अघि बढ्न सकेको छैन् ।
देशभर नेपाल आयल निगमका १० ओटा मुख्य डिपोहरु छन् । ति मध्य निगमको कर्णालीस्थित प्रादेशीक सुर्खेत कार्यालय भण्डारण नभएको डिपो हो । सरकारले नाकाबन्दीका बेला पाठ सिकेको भन्दै कम्तिमा ९० दिनलाई पुग्ने गरी तेलको भण्डारण राख्न सक्ने नयाँ संरचना निर्माण गर्ने बताएको थियो ।
तेल भण्डारण संरचना निर्माणको योजनालाई गम्भीर रुपमा सरकारले अघि नबढाउँदा सुर्खेतमा पनि हालसम्म भण्डारण क्षमता विस्तारको काम अघि बढेको छैन् । सुर्खेतमा दुई दिन मात्रै आपूर्ती प्रभावित भए सवारी साधन ठप्प हुने स्थिति छ । यति मात्रै हैन अत्यावश्यक सवारी साधनलाइ तेल दिन सक्ने स्थित निगमकाे डिपाे र यहाँका पेट्राेल पम्पहरूसंग भण्डारण क्षमता पनि छैन् ।
तर यस विषयमा कर्णाली सरकार र यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू वेखबर छन् । यस बारेमा चासाे नराख्नु गलत भएकाे यहाँका उद्याेगी व्यवसायीहरूले टिप्पणि गरेका छन् ।
तेलको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न पहली प्रयास गरेपनि काम नहुनु दुःखद् भएको सुर्खेत उद्योग बाणिज्य संघका महासचिव लक्ष्मण कंडेलले बताउनुभयो । ‘सुर्खेतमा तेल भण्डारण अत्यावश्यक छ’ कंडेल भन्नुहुन्छ, ‘विकासको हिसाबले पछि परेको कर्णालीको द्रुत विकासका लागि अनिवार्य कम्तीमा तीन महिना धान्ने भण्डारण क्षमता तत्काल निर्माणकाे प्रक्रियामा सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन् ।’
निगमको प्रादेशीक कार्यालय सुर्खेतमा भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न नसकिने भन्दै सुब्बाकुनामा रहेको ट्रस्टको जग्गा प्राप्तीका लागि कार्यालयले गत वर्ष नै पत्रचार गरिसकेको थियो । तर काम भने हालसम्म अघि बढेको छैन् ।
नयाँ जमिन खरिद गर्नुभन्दा ट्रष्टकै ३४ विगाह ७ कठ्ठा जमिन उपलव्ध गराउन सरकारलाई अनुरोध गरिएको हो । ‘सुर्खेत कार्यालयमा डिजेल र पेट्रोलको भण्डार क्षमता शुन्य छ’ निगमको प्रादेशीक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख दिपकप्रसाद घिमिरेले भन्नुभयो, ‘जग्गा प्राप्तीका लागि निगमको केन्द्रीय कार्यालयलाई गत आर्थिक वर्ष नै पत्रचार गरिसकेका छौं । त्यो बाहेक थप जानकारी आएको छैन् ।’
सुर्खेतमा हवाई इन्धन र मट्टीतेलका लागि झण्डै एक हप्ता पुग्ने भण्डारण क्षमता मात्रै छ । त्यो पनि अप्रयाप्त रहेको प्रमुख घिमिरेको भनाई छ । ‘कुनै प्रावधिक कारण इन्धन आपूर्तीमा समस्या भए सुर्खेतमा हाहाकार हुने स्थिती छ’ घिमिरेले थप्नुभयो, ‘नयाँ जग्गा खरिद गर्नुभन्दा ट्रष्टकै जग्गा प्राप्ती गर्न सके कर्णालीका लागि झण्डै ६ महिना पुग्ने तेल भण्डार गर्न सकिन्छ ।’
सरकारले ट्रष्टको नाममा रहेको २० विगाह मात्रै जमिन दिए संरचना निर्माण गर्न सकिने निगमले जनाएको छ । हाल कार्यालय रहेको एयरपोर्टमा १८ कठ्ठा जग्गामा भण्डारण संरचना निर्माण गर्न नसकिने बताउनुभएका घिमिरेले ट्रष्टकै जग्गा प्राप्ती भए सहज हुने उल्लेख गर्नुभयाे ।
उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले निमगलाई जग्गा उपलव्ध गराए कम्तीमा तीन वर्षमा भण्डारण संरचना निर्माणको काम सम्पन्न गर्न सकिने घिमिरेको भनाई छ । सुर्खेतमा दैनिक झण्डै ४० हजार लिटर पेट्रोल र २ लाख डिजेल विक्री हुने गरेको छ ।
प्रकाशित मितिः आइतवार, भदौ २२, २०७६ 12:03:25 PM
Prevचालक एशोसियसनको शाखा उद्घाटन
Nextसुर्खेत उपत्यका खानेपानीको कार्यालयमा किन लाग्यो ताला ?